घर जान निस्केकाहरू दुई दिनदेखि बालकुमारीमा गाडीभित्रै अलपत्र – Nepalpostkhabar
nanda । १८ बैशाख २०७७, बिहीबार ११:४५ मा प्रकाशित
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा काठमाडौंमा खान–बस्न समस्या भएपछि घर जान निस्किएका पूर्वका ५० नागरिक दुई दिनदेखि ललितपुरको बालकुमारीमा गाडीभित्रै अलपत्र परेका छन् । उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट घन्टौँ हिँडेर बालकुमारीमा जम्मा भएका उनीहरू प्रहरीले गाडी छुट्न नदिएपछि बिलखबन्धमा परेका हुन् ।
‘आफू त जेनतेन बाँचिएला । यो नानीलाइै के खुवाउने मैले रु मेरो दूध आउँदैन, पैसा हुँदा त ल्याक्टोजिन खुवाउँथ्यौँ,’ शान्ताले पीडा पोखिन्, ‘आज पनि बिहानदेखि केही खान पाएको छैन । झन् अलपत्र पो परियो । घर जान पाइएन भने त मेरो नानीलाई के खुवाएर बचाउनु ?’
उनले छोराको कोठामा खानेकुरा सकिएको पीडा सुनाइन् । ‘कोठामा चामल पनि सकियो । गाडीले उदयपुर छाडिदियो भने त हिँडेर पनि जाने भनेर खुसी हुँदै आइयो, तर प्रहरीले रोक्यो,’ सुजमायाले भनिन्, ‘यहाँ झन् दिनभर भोकै भइयो । आराम गर्न पनि मिल्दैन । बिरामी मान्छे, रिँगटा लागिरहेको छ । हैन सरकारले केही गर्दैन रहेछ ? यस्तै हो भने त यतै मरिन्छ पो
मंगलबार बिहानदेखि बुधबार अपराह्नसम्म मुखमा पानी र एक पोको चाउचाउबाहेक केही नपरेको उनले बताइन् । ‘एउटा चाउचाउ मैले र नातिनीले बाँडेर खायौँ । नातिनी भोक लाग्यो भन्छे, तर आफूसँग पैसा पनि छैन,’ नातिनीतिर हेरेर उनले भनिन्, ‘यसैले घर जाऊँ भनेर हत्ते गरेपछि हिँडेका थियौँ । अब कति दिन यसैगरी बस्नुपर्ने हो रु हामीलाई त यसरी रोगले भन्दा भोकले लैजाने भयो ।’
गाडी खोला किनारमा छ । रातभर लामखुट्टे भुनभुनाउँछ, खोलाको गन्धले उस्तै सताउँछ । ‘कानमा मच्छड कराउँछ, भोकले पेट कराउँछ । अनिदो र भोको भइयो, आपत् पर्‍यो,’ फुलसरीले गुनासो गरिन्, ‘सहयोग गर्नेहरू पनि कोही छैनन् । हामीजस्ता बुढाबुढीलाई यसरी अलपत्र पारेर सरकारलाई के फाइदा हुन्छ र
उदयपुर रामपुरका दिनेश खड्का पनि लकडाउनसँगै काठमाडौंमा मजदुरी गुमेपछि घर फर्किन बालकुमारी पुगेका छन्  । कोठाबाट खान नपाएर निस्किएको, यहाँ गाडीमा आएर झन् बित्यासमा परियो,’ उनले भने, कोठा छोडेको ५० घन्टा बित्यो, पानी र चाउचाउबाहेक मुखमा परेको छैन । खल्तीमा ५० रुपैयाँभन्दा छैन, अब के गर्ने ?
लकडाउनमा घरबाट निस्किन हुन्न भन्ने थाहा भए पनि बाध्यताले निस्किनुपरेको बताए । तर, भोको पेट कसरी कोठाभित्रै थुनिएर बस्न सकिन्छ रु’ दिनेशले सरकारसँग गुनासो गरे, ‘१५ गते खुल्छ अनि घर जाउँला भनेर अस्तिदेखि नै एकछाक मात्रै खाएर बसिरहेका थियौँ । तर, नखुलेपछि कसरी यहाँ बस्ने ? रहर लागेर हिँडेको होइन नि  सरकारले खान देओस्, हामी कोठामै बस्छौँ ।